Homeसमाचारबुवाले देको पिडा सम्झेर रोइन् अन्जु पन्तकी छोरी, छोरी भन्छिन्: ‘मम्मी अब बिवाह गर्नुस्’(भिडियो हेर्नुहोस्)
December 14, 2020 admin समाचार 9222
हालै एक म्यूजिक भिडियो युट्युबमा सार्व’जनिक भएको छ । गीतको बोल हो ‘धेरै माया नदेऊ मलाई, टाढा हुँदा गा’ह्रो हुन्छ’ । जसमा स्वर तथा संगीत अञ्जु पन्तले भरेकी छिन् भने छोरी परितोषिकाले अ’भिनय गरेकी छिन् । यही गीतको अन्तर्वार्तामा अञ्जु पन्त र उनको छोरी परितोषिका पन्तबीच धेरै कु’राहरु भए । जहाँ गीतको कुरासँगै आमा छोरीको विवाहको कुरा पनि नि’स्कियो ।
आफ्नो विवा’हप्रति छोरी परितोषिकाले भनिन् ‘सधैं त म ममीसँग हुन सक्दिनँ । त्यसैले त मैले ममीलाई जी’वनसाथी खोज्न बा’रम्बार आग्रह गरेको छु ।’ अञ्जुलाई छोरीले नै बिहेका लागि स्वीकृति र द’बाब दिएकी छिन् । तर, के अञ्जु बिहे गर्ने सो’चमा पुगेकी छिन् त ? यसमा अञ्जुले भनिन् ‘नानीले जहिले पनि मलाई किन नि’राश हुनुभएको भन्छिन् । मेरो डि’भोर्स भएको १० वर्ष भयो । १० वर्षदेखि मलाई छोरीको साथ त छ । तर, उनी पनि पराई घर गएपछि मलाई दुख्दा तातो पानी त’ताएर दिने मान्छे चाहिन्छ ।
छोरीले बिहे गर्नैपर्छ भनेर प्रे’सर दिइरहेकी छिन् । तर, मेरो सोच बिहे नै नगर्ने हो । यो मेरो इच्छा नै नभ’एको कुरा हो । तर, मलाई धेरैले बिहेका लागि सु’झाव दिइरहनु भएको छ।’ अञ्जुलाई अहि’लेसम्म बिहे गर्नुपर्छ भन्ने सोच त आएको छैन । तर, भोलिको दिनमा भइ’हाल्यो भने पनि उनी सह’र्ष स्वीकार गर्ने पक्षमा छिन् । आफूलाई बुझ्ने, नब’दलिने प्रेम गर्ने मानिस आएको खण्डमा अञ्जु बिहे स्वि’कार गर्ने सोचमा छिन् ।
परितोषिका सानै हुँदा अञ्जु र मनोज राजको डि’भोर्स भयो । परितोषिकाले बाबुको अ’भाव महसुस गरिन् त ? भन्ने प्रश्नमा परितोषिकाले भनिन् ‘बच्चामा कहि’लेकाहीँ त लाग्थ्यो नै । तर, मेरो ममीले मलाई आमा र बुबा दुवैको माया दिनुभएको छ । त्यसैले पनि मैले कहिल्यै पनि बुबाको मायाको अ’भाव भोगिनँ ।’ अञ्जुले यो प्रश्नमा थप्दै भनिन्–‘बच्चा हुँदा जन्मदिनको स’मयमा झमझम पानी परिरहेको थियो । बुबा आउनुहुन्छ भनेर उनले धेरै समय पर्खिइन् । पछि, केही बर्षसम्म उनले बुबालाई प’र्खिने गर्थिन् । तर, विस्तारै उनलाई पनि बानी पर्‍यो ।’
उनले थपिन् ‘मलाई चौतर्फी रुपमा तना’व हुँदा पनि छोरीका का’रण खुशी मिलेको छ । यसैले पनि मलाई बाँच्ने आ’धार मिलेको छ ।’ परितोषिका मोड’लिङ गर्ने र नायिका बन्ने सोचका साथ अगाडि बढेकी छन् । उनलाई नायिका बनाउ’नका लागि नि’र्माता–निर्देशक अञ्जुको घरसम्म पुगेका छन् । अब भने अञ्जु छोरीलाई कला क्षेत्रमा ल्याउने त’यारीमा लागेकी छिन् ।- इताजा खबबाट
March 23, 2021 admin समाचार 5585
नेपाल टेलिभिजनबाट प्र’सारण भइरहेको ‘दोहोरी च्याम्पियन’ आलोचित बनेको छ । ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को पहिलो एपिसियोड नै आ’लोचना नै आलो’चनाले भरिएको छ । हजारौँले दिएको डिजिटल अडिसनबाट छनोट भएका ३५ टिमको फिजिकल अडिसन शनिवार प्र’सारण गरिएको
ट्युसन पढ्न हिँडेकी कविताको रह’स्यमय मृ’त्यु, यस्तो रहेछ घटनाको नालीबेली
April 6, 2022 admin समाचार 1318
उदयपुरको बेलका नगरपालिका–३ स्थित कोशी जनता माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको ह’त्या भएको छ । ट्युसन पढ्न हिँडेकी कविता सुनुवारको शव मंगलबार बिहान यसोदा खोला न’जिकै भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जना’एको छ । कोशी जनता उच्च
April 29, 2021 admin समाचार 5999
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबा’रका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमे’रिकी डलर एकको खरिदर ११८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ११९.२७ पैसा रहेको छ । यस्तै युरो एकको ख’रिददर १४३ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर